Mee ka Ọdịnaya Ọdịnaya Gị Na-aba Nje na usoro 5 ndị ​​a | Martech Zone
Anyị ekekọrịtala ihe ọmụma ndị ọzọ na ọcha nke malitere ịrịa ọdịnaya m na-enwekarị oge ịkwanye malitere ịrịa dị ka atụmatụ. Ihe omimi nke ihe omuma nwere ike iweta ihe omuma - anyi na-ahu nke a mgbe nile na vidiyo. Agbanyeghị, ahụtụbeghị m onye ọ bụla kụrụ ya n'ogige ahụ oge ọ bụla. Fọdụ na-agbasi mbọ ike, ụfọdụ na-adaba adaba truly ọ bụ n'ezie nchikota nke talent na chioma nke na-eme ka ọdịnaya gị dị elu.
Nke ahụ kwuru, ekwenyere m na usoro eji eme ihe mgbe ị na-elekwasị anya malitere ịrịa bụ ezigbo atụmatụ maka ọdịnaya n'ozuzu. Na ozi infographic a site na WhoIsHostingThis ?, ha na-asụpe Ihe 5 mere na ọdịnaya gị dị egwu anaghị aga n'ihu:
Enweghị mmetụta mkpali - ndị mmadụ na-ekerịta ọdịnaya na-eme ka mmadụ nwee mmasị, ịtụnanya, mmasị, ịtụnanya, enweghị mgbagwoju anya, mmasi na ọchị.
Abụghị “Sharekekọrịta Onye Kwesịrị Ekwesị” - ndị mmadụ chọrọ ịkọrọ ya, ọ dị mfe ịkekọrịta, ọ na-eweta uru, ọ ga-adọtakwa ndị ọzọ.
Oge na-adịghị mma - chọta oge nke ụbọchị, izu, oge ma ọ bụ ihe omume nke ọdịnaya a chọrọ na ewu ewu.
Atụmatụ na-adịghị mma - nhazi, agba na visual mkpesa metụtara ma ọ bụrụ na ọdịnaya nwere ike ịda mba. Ulo oru nke imewe bu itinye ego na ikekwe ya.
Nkesa Na-adịghị Mma - nke a nwere ike bụrụ nke anyị hụrụ ma ọ dịkarịa ala ebudatara… kesaa ma kwalite ọdịnaya gị n'ofe saịtị ebe ọ ga-eru ọtụtụ ndị na-ege ntị.
Tags: mmasiijuanyaihe ijuanyaọdịnaya dị egwuatụmatụ ọdịnayaọchịchọ ịmataobimkpali nke mmetụta ucheọchịmmasịInfographics Ahịaejighị n'akamalitere ịrịamalitere ịrịavidiyo vidiyo